Esemokwu nke onye isi | Law & More B.V.
blog » Esemokwu nke Director
Esemokwu nke Director
Ndị isi ụlọ ọrụ kwesịrị iburu n'uche ụlọ ọrụ oge niile. Gịnị ma ọ bụrụ na ndị nduzi ga-eme mkpebi ndị metụtara ihe ndị na-amasị ha? Kedu mmasị na-aga n'ihu na gịnị ka onye nduzi na-atụ anya ime n'ọnọdụ dị otú ahụ?
Kedu mgbe enwere esemokwu?
Mgbe ị na-elekọta ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ ahụ nwere ike ịme mkpebi mgbe ụfọdụ na-enyekwa onye ntụzi aka otu uru. Dị ka onye ntụzi, ị ga-ele anya na ihe ụlọ ọrụ gị na-eme abụghị naanị nke gị. Enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na mkpebi nke ndị isi nchịkwa na-eme na-eweta onye isi na-erite uru n'onwe ya. Nke a dị iche ma ọ bụrụ na mmasị onwe onye a emegideghị ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ. N'okwu ahụ, onye nduzi nwere ike ọ gaghị esonye na nzukọ na mkpebi.
N'okwu Bruil, Courtlọikpe Kasị Elu kpebiri na esemokwu nwere mmasị ma ọ bụrụ na onye nduzi enweghị ike ichebe ọdịmma nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụtara ya n'ụzọ ga-atụ anya na onye nchịkwa na onye nchịkwa na-enweghị atụ ga-eme ya n'ihi ọnụnọ nke mmasị onwe onye ma ọ bụ nke ọzọ na-enweghị aha na nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro.  N’ikpebi ma enwere esemokwu ọ ga-eme ka ọnọdụ niile dị mkpa nke ikpe banye na akaụntụ.
E nwere esemokwu esemokwu mgbe onye isi na-arụ ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe onye isi ụlọ ọrụ bụ onye otu ya na ụlọ ọrụ ahụ n'otu oge n'ihi na ọ bụkwa onye ntụzi nke ụlọ ọrụ iwu ọzọ. Onye nduzi ga-anọchi anya ọtụtụ ọdịmma (esemokwu). Ọ bụrụ na enwere mmasị dị ọcha, ọdịmma anaghị enwe esemokwu iwu iwu. Nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na enweghị mmasị na ọdịmma onwe onye nduzi. Otu ihe atụ nke a bụ mgbe ụlọ ọrụ otu abụọ abanye nkwekọrịta. Ọ bụrụ na onye nduzi bụ onye ntụzi ọrụ nke ụlọ ọrụ abụọ a, mana ọ bụghị onye (n) (nke na-enweghị isi) ma ọ bụ na ọ nweghị mmasị onwe onye ọzọ, enweghị ikike esemokwu ọ bụla.
Kedu ihe si na ọnụnọ nke esemokwu ọdịmma pụta?
Edebela nsonaazụ nke esemokwu nke ọdịmma na Dutch Civil Code. Onye nduzi enweghị ike isonye na mkparịta ụka na mkpebi ma ọ bụrụ na o nwere mmasị onwe onye ma ọ bụ nke na-enweghị isi nke na-emegide ọdịmma nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụtara ya. Ọ bụrụ na enweghị ike ịme mkpebi mkpebi ọ bụla, ndị nlekọta ga-ahụ mkpebi ahụ. Na enweghị onye nlekọta nlekọta, nzukọ ga-anabata mkpebi ahụ, belụsọ na ụkpụrụ nyere n'ụzọ ọzọ. Ejiri ndokwa a na ngalaba 2: 129 paragraf nke 6 maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọha na eze (NV) na 2: 239 paragraf nke 6 nke Dutch Civil Code maka ụlọ ọrụ na-ejighị oke (BV).
Enweghị ike ikwubi site na isiokwu ndị a na ọ bụ onye nduzi ka ọ ga-adị naanị maka ụdị esemokwu a. A gaghịkwa ata ya ụta maka ịdaba n'ọnọdụ ahụ. Ihe edere na-ekwupụta na onye nduzi ga-ezere isonye na nyocha na usoro mkpebi. Ya mere, ọ bụghị ụkpụrụ omume na-eduga na ntaramahụhụ ma ọ bụ mgbochi nke esemokwu nke mmasị, mana ọ bụ naanị ụkpụrụ omume nke na-akọwa etu onye isi nduzi kwesịrị isi mee mgbe esemokwu nwere mmasị. Mmachibido ikere òkè na mkparịta ụka na mkpebi na-egosi na onye ntụzi aka metụtara nwere ike ọ gaghị votu, mana enwere ike ịrịọ maka ozi tupu nzukọ ọgbakọ ma ọ bụ iwebata ihe ahụ na usoro nke nzukọ ọgbakọ. Imebi isiokwu ndị a ga - eme ka mkpebi ahụ bụrụ ihe efu ma ọ bụrụ na ọ dabere na edemede 2: 15 ngalaba 1 sub a nke Dutch Civil Code. Isiokwu a kwuru na mkpebi agaghị adị ire ma ọ bụrụ na ha megidere ndokwa na-achịkwa nguzobe mkpebi. Omume maka nhichapụ nwere ike ịmalite onye ọ bụla nwere ezi uche na nnabata na ndokwa ahụ.
Ọ bụghị naanị ọrụ nke abstin na-emetụta. Onye nduzi ga-enyekwa ozi gbasara esemokwu nwere ike ịdị na mkpebi nke a ga-akpọrọ ndị nlekọta na oge. Ọzọkwa, ọ na-esite na edemede 2: 9 nke Dutch Civil Code na esemokwu nke mmasị ga-agwakwala na nzukọ izugbe nke ndị na - ekenye ndị ọzọ. Otú ọ dị, iwu ekwughị n'ụzọ doro anya mgbe ọrụ nke ịkọ akụkọ mezuru. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya itinye ndokwa maka mmetụta a na ụkpụrụ ma ọ bụ ebe ọzọ. Ebumnuche nke onye omebe iwu nwere iwu ndị a bụ iji chebe ụlọ ọrụ megide ihe ize ndụ nke onye isi na-emetụta ọdịmma onwe ya. Uche dị otú ahụ na-abawanye ohere nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe nsogbu. Nkebi nke 2: 9 nke Dutch Civil Code - nke na-achịkwa ikike nke ndị isi - nọ n'okpuru oke ụzọ. Ndị nduzi ga-akwụ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ha emee omume ọjọọ. Enweghị ike ime ihe megidere iwu ma ọ bụ iwu nke iwu nwere mmasị bụ ọnọdụ siri ike nke na-eduga n'ịdu ndị nduzi. Enwere ike ịkatọ onye ndu na-emegiderịta onwe ya na ya, yabụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịta ụta.
Ebe ọ bụ na esemokwu mmasi emezigharịrị, iwu nnọchi anya ndị metụtara ọnọdụ ndị dị otú a. Ngalaba 2: 130 na 2: 240 nke Dutch Civil Code dị mkpa na nke a. N'aka nke ọzọ, onye nduzi nke dabere na esemokwu iwu ọdịmma anaghị anabata isonye na mkparịta ụka na mkpebi, enyere ikike ịnọchite ụlọ ọrụ ahụ na iwu iwu na-etinye mkpebi ahụ. N'okpuru iwu ochie, esemokwu nke ọdịmma dugara mmachi n'ike nke ndị nnọchi anya: a hapụghị onye nduzi ahụ ka ọ nọchite anya ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na onye nduzi nwere mmasị na-emegiderịta onwe ya, ọ ghaghị ịhapụ ịtụgharị uche na ime mkpebi. Nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na o nwere mmasị onwe onye ma ọ bụ mmasị na-anaghị adaba na mmasị ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na onye isi ọrụ anaghị arụ ọrụ dịịrị ya ịhapụ, ọ nwere ike ịbawanye ohere na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebo ya ebubo dịka onye ntụzi. Ọzọkwa, onye ọ bụla nwere ezi uche dị na ya nwere ike mebi mkpebi ahụ. N'agbanyeghị na enweghị mmasị, onye isi ụlọ ọrụ ahụ ka nwere ike ịnọchite anya ụlọ ọrụ ahụ.
Ndi esisọn̄ fi ndibiere m̀m whether odu n̄kpọ emi esịnde udọn̄ ọnọ owo? Ma ọ bụ na ị na-enwe obi abụọ ma ị kwesịrị igosipụta ịdị adị nke mmasị ma gwa ndị isi ahụ? Jụọ ndị ọka iwu Iwu Corporate na Law & More iji gwa gị. Ọnụ anyị nwere ike ịtụle ọnọdụ na ohere. Na ndabere nke nyocha a, anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ na usoro ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. Obi ga-adịkwa anyị ụtọ inye gị ndụmọdụ ma nyere gị aka mgbe ị na-eme ihe ọ bụla.
Previous Post Gbanwee na ụtụ isi mbufe: ndị mbido na ndị na-etinye ego na-a attentiona ntị!
Next Post Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ ọrụ ego gị?